एमसीसीले जोड्न सक्छ काँग्रेस-माओवादीलाई ! – हाम्रो देश
काठमाडौं । एमाले इतर दलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्न थालेको कति भयो ? सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरे देखिनै उनीहरू ओलीको बहिर्गमन पर्खिरहेका छन् ।
तर उनीहरूले न त अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सकेका छन् न त माओवादीले नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिनुका पछाडि जे सुकै कारण भए पनि ओलीइतर सत्ता समीकरण बन्न नसक्नु नै मुख्य कारण हो । यसमा जनता समाजवादी पार्टीको रोल पनि महत्त्वपूर्ण छ । जसपाको एक पक्षले निरन्तर ओलीलाई साथ दिने बताइरहेको छ ।
माओवादीले ओलीको बहिर्गमनका लागि प्रयत्न गरे पनि काँग्रेस पनि खुलेर लागेको छैन । काँग्रेसले आधिकारिक रूपमा आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरे पनि यसले केही मुद्दामा सुनिश्चितता खोजेको देखिन्छ ।
त्यो हो एमसीसी । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्र कार्की अर्थमन्त्री रहेको बेला एमसीसी सम्झौता भएको थियो । एमसीसी जसरी पनि पास गर्नुपर्ने देउवाको अडान छ । त्यही कारण उनी ओलीसँग पनि नजिक छन् ।
माओवादीमा यसबारे प्रस्ट छैन । माओवादीका केही नेताले एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्न नहुनेमा छन् । यही कारण माओवादीले सभामुखमार्फत दुई वर्षदेखि एमसीसी रोकेर राखेको छ ।